”हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानसभा छ”-पुर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, हेर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
”हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानसभा छ”-पुर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, हेर्नुहोस् ।
काठमाडौ : नेपाली राजनीतिमा सन्तुलित, परिपक्व, मृदुभाषी र स्पष्टवक्ताको छवि स्थापित गरेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले त्यसबेला देखिएका अनेकौ चुनौ’तीलाई सकारात्मक वातावरणमा रुपा’न्तरण गर्दै सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सविधानसभाबाट सङ्घीय लो’कतान्त्रिक गण’तन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न विशेष भू’मिका खेलेका थिए।
भिन्न राजनीतिक आ’न्दोलन, सि’द्धान्त र पृष्ठ’भूमिबाट आएका राजनीतिक दललाई निरन्तर संवादको माध्यमबाट एक ठाउँमा ल्याएर नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना, स’ङ्घर्ष र बलि’दानको उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाबाट सं’मावेशी संविधान जारी गराउन सफल नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङकै सुझाव, स’क्रियता र समन्वयमा नेकपाभित्र पछिल्लो समय उठेको आन्तरिक विवादको समेत निरु’पण भएको थियो।
नेपालको संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा गर्दै गरेको अवसरमा पूर्वसभामुख नेम्बाङ संविधान कार्या’न्वयन गरेर जाने सन्दर्भमा सबै परि’वर्तनकारी शक्ति र सिङगो देश एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन‍्।उनका अनुसार तराई–मधेशदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, संस्कृति मान्ने जनता राष्ट्रहितका विषयमा इमान्दार र ग’म्भीर भएर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। संविधान कार्या’न्वयन गरेर अघि बढ्ने’तर्फ लाग्नुपर्छ।
हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो।संविधानले अधिकार र क’र्तव्यको व्यवस्था गरे पनि बु’द्धि, विवेक र क्षमता नदिने बताउँदै तत्कालीन संविधान सभाध्यक्ष नेम्बाङ भन्छन्, ‘संविधानलाई इमान्दा’रपूर्वक का’र्यान्वयन गर्दै देखिएका जायज असन्तु’ष्टिलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको अर्काे मौका र विकल्प छैन।’ संविधान दिवस र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता नारायण न्यौपानेसँग गरेको वार्ताः
सङ्घीय लोकता’न्त्रिक ग’णतन्त्र नेपालकोे संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा हुँदैछ। यस दिनलाई यहाँ कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दाको त्यो ऐतिहासिक क्ष’णलाई गर्व र सम्मानका साथ सम्झना गर्छु। नेपाली जनताले ७० वर्षभन्दा बढीे समयदेखि जनताले जनताका लागि संविधान बनाउनुपर्छ भनेर गरेको निरन्तरको सङ्घर्षले सफलता प्राप्त गरेको दिन थियो। त्यो दिन नेपालका सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनका उपल’ब्धिहरुलाई संस्थागत गरेको दिन थियो।
नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मू’र्तता प्राप्त गरेको त्यस दिनलाई सदा त्यही रुपमा नै स्मरण गर्छु।त्यो ऐतिहासिक क्षण आउन कसरी सम्भव भयो? २००७ सालकै हाराहा’रीमा नेपालमा संविधा’नसभाबाट संविधान बनाइनुपर्छ भनेर घोषणा भएको हो। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनता र हामी सबै त्यसमा लागेका हौं। तर सफलता पाउन धेरै समय लाग्यो।
त्यो सफलता प्राप्त गर्न २०६२/६३ को आन्दोलन कुर्नु प¥र्‍यो। जतिबेला जनता बलियो भए, संविधानसभाको कुरा उठ्थ्यो। जति बेला जनता कम’जोर हुनु पुग्थे, संविधानसभाको विषय ओझेलमा पर्थ्यो।आन्दो’लनको उत्क’र्षमा जनता यति सबल भए, आखिरमा संविधान सभाले मूर्तता पाउने दिन हाम्रो अगाडि आयो। संयुक्त जनआन्दो’लनको परिणामले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक मुहुर्त जु¥र्‍यो।
एकपटक भत्कि’सकेता पनि दो’स्रो निर्वा’चन गरेर हामीले त्यो समावेशी संविधान सभाबाट संविधान बनाई छाड्यौँ। त्यो साँच्चिकै ऐतिहासिक पक्ष हो।मैले अध्यक्षको आसनबाट नेपाली जनतालाई असोज ३ गतेका दिन धन्यवाद भनेको छु। राजनीतिक दललाई निरन्तर अघि बढ्न सहयोग गर्ने नेपाली जनता धन्यवादका पात्र छन्।
मैले भनेको थिएँ, राजनीतिक दलहरु संविधानसभा मार्फत संविधान नि’र्माणको कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर जुटेका थिए, एकमुख भएका थिए। कतिपय विवाद हुँदाहुँदै पनि संवि’धानसभाबाट संविधान बनाउने काममा राजनीतिक दलहरू र तिनीहरुको नेतृ’त्व लागेको थियो। त्यसैले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई हामीले सम्झनुपर्छ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अहोरात्र खटिने सभासद्, संविधानसभा सचिवालयका कर्म’चारीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो ऐतिहासिक दिनमा सिङगो देशका जनतालाई पटक–पटक स्मरण गर्न र उहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।नेपाली जनताको ठूलो बलिदानी, लामो सङ्घर्षको उपलब्धिका रुपमा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अहिले कस्तो देखिरहनुभएकोे छ?
हामीले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गण’तन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीता सहितको ऐतिहासिक संविधान जारी ग¥र्‍यौँ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट जनताले जनताका लागि संविधान बनायो। पहिलो पटक शासक होइन, जनता नै स्रो’त थिए। त्यस अर्थमा संविधान फरक ढङ्गले बन्यो।यसभन्दामाथि अर्काे शक्ति नै छैन। त्यस रुपमा यस संविधानको नि’र्माण भएको हो। वास्तवमा यो संविधान समझदारी र सहमतिको दस्तावेज हो।
संविधानसभा यति धेरै समावेशी थियो कि राजनीतिक रुपमा सबै खालका शक्ति उपस्थित थिए। उदाहरणका लागि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँको संविधानसभामा झन्डै एक प्रकारले एउटा राजनीतिक दलको प्र’भूत्व थियो। हाम्रोमा संविधानसभा निरं’कुश पञ्चा’यती व्यवस्थामा काम गरेका, उहाँहरुका विरु’द्धमा लडेका नेपाली काङग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी उपस्थिति थियो। यसरी हुँदैन सशक्त आन्दोलन र क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र विभिन्न जाति, भाषा र जनतालाई प्रति’निधित्व गर्ने झण्डै ३१ राजनीतिक दल सभामा उपस्थित थिए।
हामीले सहभागितामूलक ढङ्गले छलफल गरी दुईपटक जनताको बीचमा गएर सम्झौता र सहमतिको दस्तावेजको रुपमा संविधान बनायौँ। सबै राजनीतिक सम्झौता र सहमति गरेर हामीले यस्तो संविधान निर्माण ग¥र्‍यौं अब जनताको मन जितेर संसदमा आउनुस्, संसद् मार्फत तपाईले चाहेको जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ भन्यौं। हामीले यति ल’चिलो संविधान बनायौँ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि हालसम्म नेपाली जनताले के कस्तो लाभ लिन सके जस्तो लाग्छ यहाँलाई?नयाँ संविधान जारी गरी सकेपछि तीन वर्षभित्र ऐनको निर्माण गरेर जनतालाई ऐतिहासिक रुपमा अधिकार दियौं, हामीले यति धेरै मौलिक अधिकार जनतालाई उपलब्ध गराएका छौं।
वास्तवमा यो प्रशंसाको विषय बनेको छ। अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई छोटो अवधिमा सबै कानून संविधानसम्मत बनायौं।यसलाई का’र्यान्वयन गर्ने सन्द’र्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन गरेर मूलभूत कुरालाई कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढायौं।समावेशी व्यवस्था स्थापित गरेका छौं। संविधान कार्या’न्वयनका सन्दर्भमा धेरै महत्व’पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। जनता अधिकारसम्पन्न भएका छन्। यस आधारमा उभिएर हामीले घोषणा गरेका छौँ, अब राजनीतिक परिव’र्तन गर्नका लागि जनताले आन्दोलन गर्न पर्दैन। राजनीतिक परिवर्तन गर्ने बाटो संविधान मार्फत् सबै प्र’ष्ट छ।रासस
Previous आज संविधान दिवस, वि’विध कार्यक्रम गरी मनाइँदै,हेर्नुहोस।
Next ५५ रुपैयाँमा ३ दिन सम्म अनलिमिटेड युट्युब हेर्न पाउने नेपाल टेलिकममा ? कसरी लिने त यो अफर…हेर्नुहोस ।